Barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagu tafatiro muuqaallada: maxay yihiin iyo maxaa loo isticmaalaa | Hal-abuurka khadka tooska ah
Barnaamijyada ugu fiican ee lagu saxo fiidiyowyada
Xigasho: Macworld Spain
Tafatirka goob xayaysiis oo leh saameyn gaar ah oo aan dhamaad lahayn, cinwaannada guurguura oo ku dul wareegaya ballaca shaashada, ama xitaa codka koontaroolaya ama laxan asal ah oo la socda bilicda sawirka, ayaa ah qaar ka mid ah shaqooyinka fuliya. tafatirka muuqaalka.
Tafatirka muuqaalku waa mid ka mid ah hawlaha qayb ka ah naqshadaynta garaafyada maadaama ay sidoo kale ku jirto oo ay qayb ka tahay adduunka maqalka iyo muuqaalka ah.
Qoraalkan, Waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah barnaamijyada ugu fiican si aad u saxdo fiidiyowyadaada sida ugu macquulsan ee suurtogalka ah.. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale sharxi doonaa qaar ka mid ah hawlaheeda ugu muhiimsan.
1 Video editing: waa maxay
2 Barnaamijyada ugu fiican ee lagu saxo fiidiyowyada
2.1 Adobe Ciyaar CC Pro
2.2 Apple Final Cut Pro 10
2.4 DaVinci Xallil 17
2.5 Powerdirector Ultra 20
3 Qaar ka mid ah naqshadeeyayaasha fiidyowga tixraaca
3.1 Barbara Kruger
3.2 Jorge Alderete
3.3 Pepe Gimeno
3.4 Javier Jaen
Video editing: waa maxay
Xigasho: Digital Seville
Video editing, waxaa lagu qeexaa sida ficilka curinta iyo tafatirka taxane ah oo cajalado ah ama muuqaallo ah Kaas oo muuqaalku u kala qaybsan yahay, oo ay ka dhex muuqdaan dhinacyada sida sawirka, qoraalka, codka, dhaqdhaqaaqa, iwm.
Waa hannaan ay tahay su'aal ah in la ururiyo agab maqal-muuqaal ah oo taxane ah oo ujeeddadu tahay in la mideeyo oo lagu xidho kuwa kale si loo gaaro hal natiijo. Marka la soo koobo, habkani waa mid sii kordheysa baahida qaybta naqshadeynta ama adduunka maqal-muuqaalka.
Nashqadeeyaha ama tafatiraha fiidiyoogu waa inuu awood u leeyahay inuu ogaado qaar ka mid ah barnaamijyada ugu fiican oo uu yaqaan qalabka ay tahay in la isticmaalo wakhti kasta. Taasi waa sababta, si aad u noqoto tifaftire fiidiyoow ah, kuma filna oo kaliya inaad haysato qalab maqal muuqaal ah oo wanaagsan oo lagu bilaabo shaqada, laakiin sidoo kale, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado sida shaqada qaarkood loo saadaalinayo. Sababtan awgeed, waxaan u qaabeynay astaamo taxane ah oo ka kooban adduunka tafatirka muuqaalka oo kaa caawin doona inaad wax badan ka barato adduunka maqal-muuqaalka ah.
editor muuqaal ah waa in uu yaqaan furayaasha iyo hababka si loo dhammeeyo wanaagsan iyo natiijo aad u fiican. Taas macnaheedu maaha inay tahay tifaftire qumman, laakiin si loo sameeyo sida ugu qumman ee suurtogalka ah. Si aad tan u samayso, waa inaad samaysaa sawir-gacmeedyo horudhac ah mid kasta oo ka mid ah muuqaalada iyo montageska oo aad tuurto si waafaqsan nidaamka xulashada.
Inta shirku socdo, waa in aad ogaataa curiyayaasha ay yihiin kuwa sida fiican ula socda cunsur soo socda iyo lidkeeda. Sidan, waxaan ku maareyneynaa oo kaliya inaan ilaalino waxa noo quseeya.
Tafatiraha fiidiyaha sidoo kale waa inuu yaqaanaa sida loo abaabulo oo u qaybiyo waqtigiisa mar walba shaqadiisa. Tusaale ahaan, haddii aad ka amarto macmiil gaar ah, waa inaadan ku xisaabtamin oo keliya wakhtiga aad u hurtay hawl kasta maalin kasta. laakiin waa in ay la socotaa horumarinta mid kasta oo ka mid ah qaybaha la isku dubari doono ama la tafatiray.
Marka la soo koobo, si aad si fiican u fahamto, tafatiraha fiidiyooga ee xirfadlaha ah maaha kaliya naqshadeeye kale, laakiin sidoo kale qaybiyaha waqtiga. Taasi waa sababta tan, waa inaad sidoo kale xisaabisaa miisaaniyad alaab kasta oo aad isticmaasho.
Xigasho: Xarunta Caawinta Adobe
Shaki la'aan, Adobe's star tool lama maqnaan karo. Adobe Premiere Pro waa tifaftire muuqaal ah iyo laxamiistaha, kaas oo, ilaa maantadan la joogo, uu yahay kan ugu badan ee ay adeegsadaan tifaftirayaasha xirfadlayaasha ah iyo naqshadeeyayaasha. Isticmaalayaasha qaar ayaa sidoo kale isticmaala barnaamijyo kale sida After Effects, barnaamijka bedelaya. Labada barnaamijba waxay faa'iido u leeyihiin tafatirka, faraqa u dhexeeyaa waa heerka dhibka. In kasta oo Premiere uu ku habboon yahay kuwa hadda bilaabaya adduunka tafatirka, Saamaynta Afterr waa lidkeeda, waa barnaamij aad u badan oo farsamo ah oo u baahan saacado badan oo tafatir iyo faham ah.
Barnaamijkan aadka u wanaagsan ee ay samaysay shirkadda Apple ayaa ah mid ka mid ah fursadaha kobciya kuwa daacadda u ah Apple. Farqiga u dhexeeya kuwa kale ayaa ah in barnaamijkani uu la shaqeeyo kaliya Mac. Taas oo ah khasaare weyn haddii aadan haysan nidaamkan hawlgalka. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijkani wuxuu kaloo leeyahay faa'iidooyin badan iyo fursado badan. Tusaale ahaan, waxa ay leedahay interface aad u fudud in la isticmaalo, taas oo ka dhigaysa tafatirka aad u fudud.
Xigasho: Codka Galicia
Haddii aan ku dari lahayn barnaamij kale, waxay noqon lahayd Filmora shaki la'aan. Barnaamijkan waa mid kale oo ka mid ah isticmaalayaasha aadka loo isticmaalo. Waxaa lagu sameeyay qaab fudud oo fududeynaya isticmaalkeeda iyo horumarinta mashaariicdaada. Intaa waxaa dheer, waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiicnaanta, maadaama ay qayb ka ahayd mashruucyo badan oo muhiim ah oo adduunka maqalka ah. Haddii ay dhacdo in aanan weli ku qancin, waa in lagu daraa in ay haysato baakado badan oo gebi ahaanba bilaash ah iyo faylal warbaahin ah, kaas oo aad si degdeg ah oo sax ah uga heli karto. Shaki la'aan, waa mid ka mid ah barnaamijyada aadan ka maqnaan karin wax kasta oo adduunka ah.
DaVinci Xallil 17
Waa mid ka mid ah barnaamijyada tafatirka fiidiyaha ee ugu xirfadda badan suuqa. Si aad u badan waa barnaamijka xiddigaha ee agaasimayaal badan oo Hollywood ah. Haddi aanaan ku qancin, aan kuu sheegno in ay sidoo kale tahay mid ka mid ah barnaamijyada ka kooban hawlo badan oo la isticmaalo. Dabcan, heerka adeegsigu aad ayuu uga farsamo badan yahay barnaamijyada aan horay u soo sheegnay. taas oo u malaynaysa in faham heer sare ah iyo faham ku saabsan fulinta iyo isticmaalka barnaamijkan. Haddii aad raadineyso shay xirfad leh, tani waxay noqon kartaa shaki la'aan barnaamijka ugu fiicnaanta.
Powerdirector Ultra 20
Waa barnaamijka ugu fiican haddii aad naftaada u hurto naqshadaynta iyo kor u qaadida mashaariic badan oo shineemo. Waxa ay leedahay dhowr plugins iyo qalab kaa caawin kara oo kugu yaabin kara xaqiijinta mashaariicdaada. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay interface aad u ballaaran oo aad ka isticmaali karto mid kasta oo ka mid ah fursadaha ay. Waxay u ogolaataa tafatirka fiidiyowga 380 digrii, taas oo macnaheedu yahay in lagu ciyaari karo doorashooyin gebi ahaanba ka duwan barnaamijyadii hore. Ha ka waaban inaad tijaabiso qalabkan oo aad gacanta ku dhigto, maxaa yeelay waxay noqon kartaa qalabkii aad waligaa raadinaysay.
Qaar ka mid ah naqshadeeyayaasha fiidyowga tixraaca
Barbara Kruger waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah naqshadeeyayaasha Mareykanka ee ugu muhiimsan. Mashaariicdiisu waxay ku salaysan yihiin xubno ka soo bilowda sawir-qaadista lafteeda iyo isku-dhafka qoraallada sawirada leh. Maanta waxa ay caan ku tahay boodhadh badan oo laga buuxiyay madxafyo kala duwan. Iyadu waa naqshadeeye wanaagsan oo lagu dhiirigaliyo inkasta oo ayan u shaqeynin adduunka maqal-muuqaalka ah. Hagaag, qaar ka mid ah xarafkeeda iyo sawirradeeda ayaa kugu dhiirigelin kara waxyaabaha muhiimka ah ee aad ku darto fiidiyowyadaada. Shaki la'aan waa ikhtiyaar wanaagsan.
Jorge Alderete waa naqshadeeye ku dhashay Argentina. Waxa lagu gartaa inuu inta badan yahay naqshadeeye boodhadh heersare ah. Calaamadaha, aynu nidhaahno taasi waxay had iyo jeer ahayd ujeedadiisa ugu weyn ee naqshadeynta. Waxa lagu gartaa shaqadiisa waa adeegsiga tonalities oo u rogaya boodhadh mustaqbalka mustaqbalka ah. Waxa uu naqshadeeyay boodhadh badan oo ciyaaraha fiidyaha ah oo badan tan iyo xariiqda garaafka ee uu ku ilaalinayo waa mid aad u wanaagsan in la arko.. Waa ilo kale oo ka mid ah ilaha dhiirigelinta ee loo isticmaali karo in calaamad looga tago mashaariicdaada. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale kobcin kartaa sawirka fiidiyowyadaada si ay ugu ekaadaan boodhadhkooda.
Haddii aan ku dari lahayn naqshadeeye kaas oo aad ku dhiirigelin karto mid kasta oo ka mid ah mashaariicdaada halkaasoo dheellitirka iyo miisaanka muuqaalka looga baahan yahay, waxay shaki la'aan noqon doontaa Pepe Gimeno. Isagu waa mid ka mid ah naqshadeeyayaasha garaafyada Isbaanishka ee ugu fiicnaa taariikhda naqshadaynta garaafyada. Caadi ahaan waa ka-qaybgale mashruucyo badan, gaar ahaan kuwa leh dabeecado badan oo shirkadeed, gaar ahaan naqshadeynta calaamadaha ama calaamadaha.
Marka la soo koobo, waa mid kale oo ka mid ah fursadaha waxa laguu dhiiri galin karaa marka aad dhigayso mid kasta oo ka mid ah qaybaha fiidyahaaga iyo inaad hubiso inaad fuliso mashruuc habaysan oo habaysan.
Ma joojin karno qoraalkan annagoo xusin nashqadeeyaha boodhka weyn iyo naqshadeeyaha tafatirka. Javier Jaén waa heer sare mid ka mid ah naqshadeeyayaasha tifaftirka ugu fiican ee xilligan, si uu u awoodo inuu abuuro naqshado lagu gaaro aragti wanaagsan oo muuqaal ah oo ku saabsan walxaha iyo dheelitirka wanaagsan ee mid kasta oo iyaga ka mid ah. Shaki la'aan, waa naqshadeeye isku daraya waayo-aragnimada dhiirigelinta iyo hal-abuurka. Waa mid kale oo ka mid ah fursadaha muhiimka ah ee kugu dhiirigelinaya mashaariicdaada xiga shaki la'aan.
Tafatirka fiidiyowgu waa hawl kasta oo si fudud loo gaari karo iyada oo ay ugu wacan tahay barnaamijyada loo qorsheeyay horumarkooda dhammaystiran. Waa in sidoo kale lagu daraa in tafatirka muuqaalku uu yahay wax aad uga dhex jira filimada filimada, maadaama ay ka kooban tahay 80% wadarta guud ee mashruuca. Waxaan rajeyneynaa in qaar ka mid ah barnaamijyada aan soo jeedinay ay wax badan ku tareen. Mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa la doortay iyadoo ujeedadu tahay inay ku habboonaato isticmaale kasta, heerkuu doono ha noqdee. Dhiirran oo bilow inaad tijaabiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Barnaamijyada ugu fiican ee lagu saxo fiidiyowyada
Sida loo sameeyo fallaadhaha Adobe Photoshop
Tusaalooyinka buug-gacmeedka aqoonsiga shirkadda